शार्दूल भट्टराई - नेपाल
शार्दूल भट्टराईका लेखहरु
राजनीतिमा नेता हुन सजिलो होला तर सफल नेता हुन धेरै गाह्रो छ । सफल नेताको एउटा गुण अध्ययनशीलता पनि हो । बिनाअध्ययन र बिनाज्ञानको राजनीतिक सक्रियतामा मात्र नेताको क्षमता र गुणको मापन हुँदैन । नेता भनेको सिंगो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हो ।
शार्दूल भट्टराई, चैत्र २९, २०७५
जीवनलाई स्पर्श गर्ने यथार्थवादी कथाको शक्तिलाई पराजुलीका कथाले आत्मसात् गरेका छन् ।
शार्दूल भट्टराई, पुस २५, २०७५
[अनुभूति] अन्धविश्वासमा विश्वास
लामो न लामो टुप्पी पालेर घरमा पिनासको कथा पढ्ने रुद्र पुडासैनीले अफिसमा विज्ञान र प्रविधिको बारेमा के काम गर्लान् ?
शार्दूल भट्टराई, फाल्गुन २३, २०७४
यस्तो ठाउँमा त्यस्तो पोस्टर किन टाँसेको होला ? त्यो पोस्टर देखेदेखि नै मेरो दिमागले त्यसको कारण खोजिरहेको थियो । म त्यो पोस्टर टाँस्नुको कारणबारे जान्नका लागि उत्सुकतापूर्वक लागिरहेको थिएँ । अरूले भने मेरो उत्सुकतालाई बेकारको प्रयत्न ठानिरहेका थिए ।
शार्दूल भट्टराई, कार्तिक २८, २०७३
संस्मरण: आँखाको भाषा
म अशक्त भएर चाबहिलतिर आउन नसक्ने, तिमीहरू सशक्त भएर पनि आरुबारीतिर आउन नसक्ने । अब त भेटघाट भन्ने कुरा पनि त्यस्तै त्यस्तै होलाजस्तो छ । जे कुरा पनि आफू सक्रिय रहुन्जेलका लागि मात्रै त रहेछ !
शार्दूल भट्टराई, चैत्र ११, २०७२
पुस महिनाको जाडो। घाम झुल्किसके पनि त्यसको तापले सुदूरपश्चिमको यस पहाडी बजारलाई छुन सकेको थिएन।
शार्दूल भट्टराई, पुस २७, २०७१